ငှက်မောင်နှံ ~ မြန်မာ့သံစဉ်စာသားများ
သာရကာပေါတယ် ပန်းစုံဖူး ထူးတဲ့မြိုင်လယ် လွန်သာမောဖွယ် တောရွာကလေး အဝေးကမြင်တယ်….
(လွမ်းစရာကောင်းတဲ့ စုံမြိုင်လယ် ကမ်းစောင်းနဘေးက ပျံ့မွှေးတယ် နှင်းဆီ ဒေါန ကြိုင်လှိုင်တယ် ပွင့်/သင်း ပုံဆန်းတဲ့ ခိုင်ပန်းစံပယ် )၂
အလွန်အေးချမ်းတဲ့ ရေချောင်းနံဘေးက လှေလောင်းကလေးနဲ့ရယ် တကယ် အမူထူးတယ် ဘယ်သူမဦးဖွယ် လယ်ပတုခူးနေတယ် တကယ် မပျင်းကြဖွယ် သူငယ်ချင်းများနဲ့ လယ်ကန်သင်းနားကရယ် ပျိုအိုမလွတ်တယ် ထိုထို ကညွတ်ရယ် မှိုနားတို ဆွတ်နေတယ်….
သာရကာ ပျော်မြူးတယ် စုံခြေဦးကရယ် လွန်ကြည်နူးစေဖွယ် ထူးဆန်းတဲ့ပန်မြိုင်လယ် ဘာသာဘာဝရယ် သာရကာ ကျေးငှက်ကယ် ပင်ယံထက်မှာကွယ် တွဲယှက်တဲ့ ငှက်မောင်မယ်…..
တောမှာသာယာတယ် ရွာစည်းရိုးပတ်လည် ပျော်ရွှင်ကာပင် မြစ်ကမ်းနံဘေးမှာ အဝေးကလည်း မြင်တယ် ဘာသာဘာဝရယ် သာရကာ ကျေးငှက်ကယ် ပင်ယံထက်မှာကွယ် တွဲယှက်တဲ့ ငှက်မောင်မယ်………
သာရကာ …………………………………………… ငှက်မောင်မယ်…..
တောမှာ …………………………………………… ငှက်မောင်မယ်…..
(စုံတောမြိုင်ဦး ထူးလှတယ် စိမ့်စမ်းရေယဉ် စီးကျသွယ် )၂ (ရွှင်လန်းပင်နန်း)၂ ပန်းပေါင်းစုံရယ် ဖူးပွင့်နေကြတယ် ရွှေကေသီဆင်မြန်း စေဖို့ရယ်… ( စိတ်လက်ရွှင်လန်း အေးချမ်းလှတယ် စားဖွယ် ပေါတဲ့ မြိုင်တောလယ်)၂ ရွာအနီးမှာ ကြီးမားတဲ့ ညောင်ပင်ကြီးတွေရယ် ရွာနံဘေးမှာ အေးမြတဲ့ ဗွေငူစောင်းမှာကွယ် ရွှေဥဒေါင်းနဲ့ ကြိုးကြာရယ် တွန်သံကျူးလို့မြူးရှာတယ် သာရကာပေါတဲ့ တောခြေ၀ယ်… မြင်သူတွေရယ် စိတ်ကြူးနူးဖွယ်………..
(စုံမြိုင်လယ်…. မာဂဓာဘာသာနှော …… ပြောဆိုကာနေတယ် ….)၂
(တော်ဆက်ရက်ကယ် တောကြက်ရယ် တောငှက်ကယ် )၂ (ပင်ထက်မှာရယ် မောင်မယ်ကြည်နူး ရွှင်မြူးပါလို့ ထူးအံ့ဖွယ် သေလာတောင်စွယ် )၂ စုံမြိုင်ခြေ လမ်းကရယ် ဆန်းလှတယ် နေရီရီ တိမ်နီတိမ်ပန်းတွေရယ် ညနေခင်း သင်းပျံတယ် တောနဲ့တောင်စွယ်…..